🥇 automation yedesika yoncedo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 320
Ividiyo ye-automation yedesika yoncedo
Oda i-automation yedesika yoncedo
Kwiminyaka yakutshanje, i-Automation yeDesika yoNcedo iyimfuneko enkulu, evuma iinkonzo ezikhethekileyo zokuphucula ngokukhawuleza umgangatho wonxibelelwano kunye nabasebenzisi, ukulungelelanisa ingxelo kunye namaxwebhu okulawula, ukwamkela kunye nokusebenza kwezicelo, nokuphendula kwiingxaki ngesantya sombane. Kwimeko ye-automation, akufanele ukhathazeke ukuba enye inkqubo yeDesika yoNcedo ihlala ingagqibekanga, umphathi akaphenduli kwisicelo, akakwazi ukulungiselela iifom eziyimfuneko ngexesha, ukudlulisa ulwazi kwiingcali zokulungisa, kwaye utshintshe ukwenza ngokupheleleyo. umsebenzi omtsha.
Uphuhliso lweSoftware ye-USU (usu.kz) ibisebenza kwindawo yoNcedo lwabasebenzisi beDesika ixesha elide, elimisela umgangatho ophezulu wokuzisebenzela, uluhlu olubanzi lweemveliso ze-IT, kunye noluhlu oluguquguqukayo nolwahlukeneyo olusebenzayo. . Akusiyo imfihlo, ayizizo zonke iingxaki ezinokufihlwa ngokuzenzekela, ezinye iimpazamo zesakhiwo kunye nokusilela kolawulo kunokusombululeka. Iirejista zeDesika yoNcedo zibonelela ngolwazi oluneenkcukacha kubathengi. Abasebenzisi abanayo ingxaki yokujonga imbali yezicelo, ukufumana inkosi yamahhala kwiimpawu ezithile zesicelo. Kwimeko ye-automation, kunzima ukuphosa i-nuance enokuthi ibe sigqibo. Ukuba iingcali zifuna iinxalenye ezongezelelweyo kunye nezinto eziphathekayo, izixhobo ezikhethekileyo, iinxalenye ezinqabileyo, ngoko ulwazi lufakwe kwingxelo, elungiselelwe yiprogram yokuzenzekelayo ekugqityweni kokulungiswa. I-platform yeDesika yoNcedo ivumela ukutshintshiselana ngokukhululekileyo idatha, isicatshulwa, kunye neefayile zegraphic, ukusabalalisa ngokufanelekileyo umthwalo womsebenzi kubasebenzi bombutho, ukubeka esweni ngokungqongqo ukuthotyelwa kwemihla ebekiwe yokulungisa. Ngaphandle kwe-automation, kunzima ukunxibelelana ngokufanelekileyo nabathengi, ukuzibandakanya kwintengiso ye-SMS yokusasazwa, kwaye uxelele nje umthengi ukuba umsebenzi ugqityiwe. Ukuba akukho ngxaki nge-odolo enye okanye ezimbini, ngoko xa kukho ezininzi zazo, kuvela ubunzima obuthile. Inzuzo eyahlukileyo yeqonga leDesika yoNcedo kukukwazi ukulungelelanisa iimeko ezithile zemimiselo yokusebenza, eyona nto ibaluleke kakhulu kwi-automation. Inkampani nganye ichaza imisebenzi yayo: imisebenzi yezemali, unxibelelwano kunye nabathengi, ubudlelwane bokusebenza, njl. Iinkqubo zeDesika yoNcedo ziye zasasazeka kumashishini amaninzi nakwiindawo zomsebenzi, kubandakanywa amaziko eenkonzo eziqhelekileyo, imibutho yezonyango, iinkonzo zenkxaso yomsebenzisi, kunye nee-arhente zikarhulumente ezikhethekileyo. unxibelelwano nabemi. Ukuzenzekela kujongeka njengesona sisombululo. Kunzima ukufumana iprojekthi esebenzayo esemgangathweni etshintsha kakhulu ulawulo kwimizuzu nje embalwa. I-platform yeDesika yoNcedo ibandakanyeka kwinkonzo kunye nenkxaso yolwazi lwabasebenzisi, ibeka iliso kwimisebenzi yangoku kunye necwangcisiweyo, ilungiselela imimiselo kunye neengxelo. Ngokuzenzekelayo, ukubhaliswa kwexesha lesicelo kuncitshiswe kakhulu. Abasebenzisi akufuneki bathathe amanyathelo angeyomfuneko. Inkqubo yobhaliso ithatha imizuzwana embalwa. Umcwangcisi uyaqinisekisa ukuba lonke ulungiso lomsebenzi lugqitywa ngexesha. Ukuba imisebenzi ethile ifuna izinto ezongezelelweyo, iinxalenye, kunye neendawo ezisecaleni, ngoko ubukrelekrele bokwenziwa bujonga ngokukhawuleza ubukho babo okanye bunceda ukucwangcisa ngokukhawuleza ukuthenga.
Uqwalaselo lweDesika yoNcedo lufanelekile kubo bonke abasebenzisi, kungakhathaliseki izakhono zekhompyutha kunye namava. Nge-automation, ukulungiswa kuhlolwa kwinqanaba ngalinye nakwinqanaba ngalinye. Ulwazi lunikezelwa ngendlela ebonakalayo. Akunqatshelwe ukwazisa abathengi malunga namanyathelo okulungisa ngokuthumela i-SMS, ukubika iindleko zenkonzo, ukwazisa iinkonzo zenkampani, njl. , ukufumana ingcali yasimahla yomsebenzi othile. Kulula ukubonisa imilinganiselo yokusebenza kwizikrini ukuze ufumane ingqiqo enentsingiselo ekusebenzeni komsebenzi ngamnye. Ukucwangciswa kweDesika yoNcedo akulandeleli kuphela izenzo zangoku kunye nezicwangcisiweyo, kodwa zilungiselela ngokuzenzekelayo iingxelo, ukusebenza kweerekhodi, kunye nokumisela iindleko zeenkonzo.
Ngokungagqibekanga, iprojekthi ye-automation ixhotyiswe ngemodyuli yokulumkisa ukugcina izandla zethu kwi-pulse, ukuthenga iindawo eziyimfuneko ngexesha, ungaphuthelwa yintlanganiso ebalulekileyo, ungalibali malunga nokugqitywa kwemihla yokugqibela yomsebenzi, njl. iinkonzo kunye neenkqubo azibandakanywanga ukwandisa kakhulu imveliso yenkonzo. Inkqubo inokusetyenziswa ngokulula naliphi na iziko lenkonzo, isebe lenkxaso yekhompyutha, kunye nombutho karhulumente. Ayizizo zonke iinketho ezibandakanyiweyo kuqwalaselo olusisiseko lwemveliso. Ezinye iifitsha ziyafumaneka ngentlawulo. Sincoma ukuba ufunde uluhlu oluhambelanayo. Ukukhetha ulungelelwaniso olufanelekileyo kufuneka luqale ngoguqulelo lwedemo ukwazi, ukuziqhelanisa, ukufunda uluhlu olusebenzayo ngendlela esisiseko. Inkqubo yoshishino ibonakaliswe: iteknoloji ekhoyo yokuphunyezwa kwenkqubo yoshishino, isakhiwo esikhoyo senkqubo yoshishino, izixhobo ezizenzekelayo, izixhobo, iindlela, njl., Ukuqinisekisa ukuphunyezwa kwenkqubo. Iimpawu eziphambili zokuvavanya ukusebenza kweenkqubo zeshishini linani leemveliso zomgangatho onikiweyo, ezihlawulwe ixesha elithile, inani labathengi beemveliso, inani lemisebenzi eqhelekileyo ekufuneka yenziwe kwimveliso yeemveliso ze ixesha elithile lekhefu, iindleko zeendleko zemveliso, ixesha lemisebenzi eqhelekileyo, utyalo-mali oluyinkunzi kwimveliso, kunye nomncedisi onobuchule njengeDesika yoNcedo oluzenzekelayo.